आज मंगलबार गणेश भगवानको ब्रत बस्नुभएको छ ? त्यसो भए यो अवस्य पढ्नुहोला
आज मंगलबार । हिन्दु धर्म अनुसार हरेक साताको हरेक एकदिन कुनै भगवानको नाममा ब्रत बस्ने गरिन्छ । त्यसैगरी आज मंगलबार पनि धेरैजना गणेश भगवानको ब्रत बस्नु भएको छ होला । तर, कतिपयलाई ब्रत बस्दाका फाइदा ? ब्रत बस्नाले के हुन्छ ? अथवा ब्रतले के फाइदा हुन्छ भन्ने सबै कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ ।
आउनुहोस् जानौं ब्रत बस्नुका मुख्य कारण
– ब्रत बस्नु भनेको संकल्प (इच्छाशक्ति बढाउनु
-आध्यत्मिकताको विकास गर्नु
-सर्वाधिक स्वास्थ्य लाभ लिनु पनि हुन् ।
ब्रत बस्नाले शरीरको शुद्धिकरणमा फाइदा पुग्छ । मोटोपन कम गर्नु, आन्तरिक सन्तुलन र सुव्यवस्थाको स्थिति प्राप्त गर्नु, थकान र अनिद्रा भगाउनु ।
ब्रतले संकल्प र शक्तिको विकास र दृढ रहनमा सहयोग गर्दछ । यदि मानिस वास्तवमै केही प्राप्त गर्न चाहान्छ भने तवसम्म उ व्रत बस्छ जबसम्म उसले चाहेको उद्धेश्य पूरा हुँदैन ।
ब्रतमा भोकै बस्नुपर्ने हुनाले तपाईले खान मन गरेपनि तपाईको इन्द्रियको पुकार तपाईको इक्षाशक्तिले नियन्त्रण गरिदिन्छ । यदि तपाईको इच्छाशक्ति दृढ हुन सकेन भने तपाई केही फलफूल र दूध पिउन सक्नुहुन्छ ।
ब्रतको दिन सचेतन, स्वार्थहीन, शारीरिक र मानसिक रुपमा त्याग हुन जरुरी हुन्छ । ब्रतको पूरैदिन यो ख्याल राख्नुहोस् कि, तपाई मानसिक र अध्यात्मिक विकासका लागि ब्रत गरिरहनु भएको छ ।
यदि तपाई ब्रत बस्ने आफ्नो संकल्प पूरा गर्नु भयो भने तपाईको आत्मविस्वास दृढ बन्दै जान्छ ।
सधै ख्याल राख्नुहोस् ब्रतको विशेष दिनमा अन्य मानिसहरुसँग विशिष्ट र मैत्रीपूर्ण तथा सार्थक व्यवहार गर्न जरुरी हुन्छ ।
यदि सबै मानिसहरु हप्तामा एकदिन ब्रत बस्ने गरेमा भोकको समस्या र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याबाट टाढा हुन सकिन्छ ।
जब बेलुका घर पुग्नुहुन्छ । हात खुट्टा धुनुहोस् । कपडा फेर्नुहोस् अनि चोखो खाना (प्रसाद) बनाउनुहोस् । जस्तै हलुवा, खिरलगायतका खाना ।
यदि स्वास्थ्यका कारण दिनभर निराहार ब्रत बस्न सम्भव छैन भने कमजोरी हुनुुहन्छ भने यातफेरि अत्यधिक टाउँको दुख्यो भने दूध र फलफूल लिन सक्नुहुन्छ । त्यस्तै जडिबुटीको चिया वा पानी पनि पिउन सक्नहुुन्छ ।
तपाइ जब आफूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ तब अन्य मानिसहरुले तपाइको सम्मान…
निन्द्रामा आउने आवाज, चित्र वा भावनाको अनुभव हुनु नै सपना…
सिइओ ज्ञवालीका खुशी र सफलताका दश शुत्र
कसरी आकर्षित गर्ने अरुलाई आफूतिर ?
यस कारण टुट्न सक्छ श्रीमान-श्रीमतीबीचको सुमधुर सम्बन्ध
के हो पार्किन्सन रोग ? के-के हुन् त यसका लक्षण ?